Real Madrid Oo Iska Iibineysa Bale Si Ay U Helaan Mbappe.
Home Suuqa kala iibsiga Real madrid oo iska iibineysa Bale si ay u helaan Mbappe.
Tottenham ayaa lagu soo waramayaa inay si joogto ah ugu dhaqaaqeyso Gareth Bale ka dib markii ninka Real Madrid uu sameeyay balanqaadkiisii ka dib qaab ciyaareed cajiib ah uu ku qaatay kooxda.
Spurs ayaa markii hore amaah ku qaadatay xidiga reer Welsh ee kana tirsan Los Blancos, iyagoo heshiiska uu ahaa in dib ugu soo celiso kooxdiisii hore, in kasta oo markii hore ay ku fiicnaayeen fikradda kordhinta, haddana waxay jilcinayaan mowqifkooda.
Waxay sidoo kale muusig u noqon doontaa dhegaha Madrid, iyadoo kooxda reer Spain ay damacsan yihiin inay adeegsadaan bixitaanka Bale si ay lacag ugu ururiyaan raadinta Kylian Mbappe.
Previous articleTammy Abraham oo doonaya inuu ka tago chelsea hadii ay fasaxaan.
Next articleZinedine Zidane oo qirtay in isbedelkii badnaa ee kooxdisa lagu ciqaabay.